कसरी मेरो सार्वजनिक आईपी परिवर्तन गर्ने: उत्तम तरीकाहरू | ग्याजेट समाचार
यस्तो हुन सक्छ कि केहि अवसरमा तपाईले सोच्नु भएको हो कि सार्वजनिक आईपी के हो, थप जसरी हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछौं। यस प्रकारको आईपीसँग परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ, जसका लागि आज त्यहाँ धेरै विधिहरू उपलब्ध छन्। हामी तपाईंलाई यसको तल यसको बारेमा अझ भन्नेछौं, ताकि तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ यो कसरी सम्भव छ।
सार्वजनिक आईपी अवधारणा हो जुन तपाईंले निश्चित रूपमा सुन्नुभएको छ, तर यो धेरै स्पष्ट छैन कि यो सामान्य रूपमा IP ठेगानाबाट कसरी भिन्न छ। यी सबैका उत्तरहरू हामी तपाईंलाई तल छोड्दछौं, ताकि तपाईं यो जान्न सक्नुहुनेछ, यो पनी यो पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि त्यसका साथै।
1 सार्वजनिक आईपी के हो?
2 यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने
2.1 राउटर खोल्नुहोस् र खोल्नुहोस्
2.2 VPN प्रयोग गर्नुहोस्
सार्वजनिक आईपी के हो?
सार्वजनिक आईपी एक आईपी ठेगाना हो, जुन यस अवस्थामा तपाईंको इन्टरनेट प्रदायकले (साधारणतया अपरेटरले तपाईंलाई) तपाईंलाई तोक्छ। हामी यसलाई देख्न सक्छौं लाइसेन्स प्लेट वा आईडी जस्तै। यस तरिकामा, जब हामी नेटवर्कमा जडान गर्दछौं, यो ठेगाना देख्न सकिन्छ र यो ज्ञात हुन्छ कि हामी नेटवर्कमा जडित छौं, किनकि प्रत्येक प्रयोगकर्ताको यस अवस्थामा फरक ठेगाना छ। यो कसरी काम गर्दछ।
इन्टर्नेट सर्फ गर्न सक्षम हुनका लागि सार्वजनिक आईपी हुनु आवश्यक छ। यो केहि अनिवार्य र अत्यावश्यक चीज हो, किनकि यदि हामीसँग यो छैन भने, त्यसो भए नेटवर्कमा जडान हुन सम्भव छैन। सामान्यतया हामी यस क्षेत्र भित्र धेरै प्रकारका पाउन सक्छौं। त्यहाँ केहि निश्चितहरू छन् जुन तिनीहरू कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन्, यद्यपि तिनीहरू मध्ये धेरैजसो गतिशील हुन्छन्, ताकि तिनीहरू समय-समयमा परिवर्तन गर्दछन्।
यो एक ठेगाना हो जुन प्रदायकले हामीलाई निर्दिष्ट गर्दछ, सब भन्दा सामान्य चीज यो गतिशील छ। फिक्स्डहरू दुर्लभ छन्, थप रूपमा, धेरै जसो अवस्थामा उनीहरूलाई भुक्तानी गरिन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई प्रश्नमा अपरेटरमा स्पष्ट रूपमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ। यद्यपि यस प्रकार थोरै प्रयोग गरिएको छ र अधिक र अधिक अपरेटरहरूले यस प्रकारको आईपीहरू प्रस्ताव गर्न रोक्दछन्।
यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने
यस अवस्थामा तपाईसँग सम्भवत: डाईनेमिक ठेगाना छ, परिवर्तनशील हुन सक्छ सबै भन्दा सामान्य कुरा यो तपाइँको अपरेटर हो जो समय-समयमा यसलाई परिवर्तन गर्ने चार्जमा हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी चर हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ अवसरहरू हुन सक्दछ जब प्रयोगकर्ता आफैंले अपरेटरमा निर्भर बिना यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ। यो प्राप्त गर्नका लागि केहि तरिकाहरू छन् जुन यो प्राप्त गर्न सहयोगी हुन सक्छ।
राउटर खोल्नुहोस् र खोल्नुहोस्
यो वास्तवमै साधारण कार्य हो, तर यो राम्रो सँग काम गर्न सक्दछ यदि हामी एक सार्वजनिक आईपी परिवर्तन गर्न चाहान्छौं। यस अवस्थामा, हामीले के गर्नुपर्‍यो हाम्रो राउटर बन्द गर्नु हो, र केहि सेकेन्डको लागि यस्तै छोड्नुहोस्। यसलाई करीव १० सेकेन्ड वा यतिका लागि बन्द गरौं र त्यसपछि हामी यसलाई फेरि सक्रिय पार्दछौं।
सम्भवतः, जब हामीले यो गरेका छौं, जब इन्टरनेटमा जडान हुँदा, हामीसँग पहिले नै सार्वजनिक आईपी ठेगाना छ जुन भिन्न छ। त्यसैले केहि सेकेन्डको मामलामा हामीले हामीले प्राप्त गरेका कुराको वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्यौं। यो आज हामी पत्ता लगाउन सक्ने सबैभन्दा सरल तरिका हो।
VPN प्रयोग गर्नुहोस्
VPNs हामीलाई सुरक्षित र निजी तरिकामा इन्टरनेट जडान गर्न को लागी, सबै प्रकारको ब्लकहरू बाइपास गरेर। यस प्रकारको जडानको लागि एउटा कुञ्जी त्यो हो हामीले प्रयोग गरिरहेको आईपी ठेगाना परिवर्तन गर्नेछौं, यस मामलामा सार्वजनिक आईपी। त्यसैले यो अर्को विधिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जुन हामीले रिसोर्ट गर्न सक्दछौं यदि हामी कम्प्युटरमा त्यो ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने। हामी केवल एक VPN प्रयोग गर्न जाँदैछन्। हामी वास्तवमा यस अवस्थामा आईपी परिवर्तन गरिरहेका छैनौं, तर यो मध्यस्थ प्रयोग गरेर, हामी एक फरकको साथ पहिचान हुन्छौं।
VPNs को चयन यी दिनहरू धेरै व्यापक छ। ब्राउजरहरू पनि मन पराउँछन् ओपेराको आफ्नै बिल्ट-इन VPN छ, जसले हामीलाई यस सम्बन्धमा मद्दत गर्दछ। त्यसोभए यो एक विकल्प खोज्ने कुरा हो जुन तपाईले खोजिरहनु भएको कुरामा फिट हुन्छ, त्यसले तपाईलाई चाहिएको फंक्शन दिनेछ ताकि तपाईले उत्तम तरिकाले नेभिगेट गर्न सक्नुहुनेछ, सार्वजनिक पपी ठेगाना परिवर्तन गर्नका साथै, जुन यस समयमा चाहिएको हो । दिमागमा राख्नुपर्ने एउटा पक्ष यो हो कि यो VPN नि: शुल्क छ, किनकी बजारमा सबै छैन।
VPN को जस्तै समान अर्को विकल्प, जुन तपाईंलाई दिनेछ सार्वजनिक आईपी ठेगाना परिवर्तन गर्न संभावना तपाईंसँग जब इन्टरनेटमा जडान हुनुहुन्छ। यस प्रकारको सेवाको अपरेशनले हामीलाई इन्टरनेटमा जडान गर्दा हामीले प्रयोग गरिरहेको भन्दा फरक ठेगाना देखाउने सम्भावना पनि दिन्छ। त्यसैले हामी यसलाई यो तरिकाले गर्न सक्दछौं जुन हाम्रो लागि सुरक्षित र अधिक विवेकपूर्ण हो। त्यसैले हामी एक प्रोक्सी खोज्न सक्छौं जुन हामीले खोजिरहेका थियौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » मेरो सार्वजनिक आईपी कसरी परिवर्तन गर्ने
Arbily G9 हेडफोन समीक्षा